Ahoana ny fampiasana ny fakantsary iPad | Vaovao IPhone
Na eo aza ny zava-misy fa ny tovolahy avy any Cupertino dia manohy miloka isan-taona mba hanomezana ny fakantsary mitovy megapixels ny fanapaha-kevitra, marina fa isan-taona dia mihatsara be ny fakan-tsary. Mila manampy an'io isika ireo fiasa vaovao nomen'i Apple ny fampiharana Camera amin'ny fahatongavan'ny iOS 8.
Miankina amin'ny fampiasana izay hataontsika amin'ny fakantsary iPad, hanolotra safidy hafa antsika ilay fitaovana. Ny fakana sary panoramic dia tsy mitovy amin'ny fakana sary mahazatra, na ny fakana horonan-tsary na ny fotoana iasana. Na eo aza ny safidy samihafa hitantsika, miankina amin'ny fampiasana izay hataontsika fakantsary, Tsotra be ilay fandidiana, zavatra mahazatra amin'ny fitaovana rehetra amboarin'i Apple.
Raha te handraikitra horonantsary isika dia tsy maintsy misafidy ny safidy Video etsy ambany. Mifantoka amin'ilay zavatra tadiavintsika hosoratana fotsiny tsy maintsy tsindrio ny faritra eo amin'ny efijery misy ny lohahevitra na zavatra resahina ho an'ny fakantsary fakàn'io fitaovana io. Ny fiasan'ny safidy Photo dia mitovy tanteraka.
Raha vao nifantoka tamin'ny zavatra na lohahevitry ny firaketana na ny sary isika dia zahao izany ny sary vokatr'izany dia maizina na maivana loatra, tsindrio ilay zavatra resahina indray, manosika ny rantsan-tananantsika isika mba hanazava ny sary na hampidina azy io raha be loatra ny jiro miditra ao amin'ilay solomaso ary tianay ny hampihena ny famirapiratany.
Safidy iray hafa, izay tsy hitantsika raha te haka sary isika, dia ny fanaraha-maso timer, mamela antsika hanemotra ny fitifirana hatramin'ny 10 segondra. Rehefa haka sary izay misy faritra mazava sy maizina be isika dia tsy maintsy manindry ny safidy HDR. Ity safidy ity dia haka sary 3 mifantoka amin'ny fisehoana amin'ny faritra maizina indrindra, amin'ny faritra maivana indrindra ary amin'ny roa tonta, hampiaraka azy ireo avy eo ary hanomezana valiny azo ekena mihoatra ny azo ekena fa raha tsy izany dia ho sarotra tokoa ny hanatratra izany.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » iPhone » Fampianarana sy torolàlana » Ahoana ny fampiasana ny fakantsary iPad
Ampidino, sintomy ireo horonan-tsary Facebook amin'ny iPhone-nao